Tim Cook wuxuu calaamadeeyaa Xbox-aasaasaha Apple Arcade | Wararka IPhone
Tim Cook Wuxuu Saxeexay Xbox Co-Founder ee Apple Arcade
Waxay u badan tahay, Muhiimadda soo socota ee kuwa ka socda Cupertino, oo aan lahayn taariikh cayiman weli, Apple waxay ku dhawaaqeysaa barnaamijkeeda cusub ee ciyaaraha, Apple Arcade, toddobaadkanna waan ogaanay taas Tim Cook Calaamadaha Xbox Wada-aasaasaha Apple Arcade: Nat Brown.
Mashruucan, oo horeyba si wanaagsan ugu horumarsanaa horumarka, lana bilaabi doono deyrta sanadkan, ayaa yeelan doona in ka badan 100 kulan oo cusub oo gaar ah. In la iska kaashado Apple waxay shaqaalaysiisay Brown, oo ka mid ah hal abuureyaasha Xbox iyo ex-Valve engineer.
Sida la tilmaamay kala duwan, Brown ayaa warkan ku faafisay barta Twitter-ka, iyagoo ku dhawaaqaya wada shaqeynta cusub ee ay la leeyihiin Apple toddobaadkan. Wuxuu faallo ka bixinayaa: "Waxaan rajeynayaa inaan sii wado ka shaqeynta himilooyinkeyga anigoo diiradda saaraya dhammaan codsiyada sawirada iyo inaan dhammaantiin la shaqeeyo naqshadeynta naqshadeynta nidaamyada Apple 🙂."
Ka dib markii uu ka shaqeynayay Microsoft oo kaashanaya naqshadeynta iyo horumarinta qalabka Xbox, Brown wuxuu qabtay jagooyin dhowr ah oo muhiim ah warshadaha teknolojiyadda, isagoo noqday Madaxweyne Ku-xigeenka Teknolojiyadda ee Myspace. Muddooyinkii dambe, waxaan ka shaqeynayay kooxda 'Valve's VR'.
Brown wuxuu had iyo jeer ka shaqeynayay horumarinta barnaamijyada iyo nidaamyada loogu talagalay ciyaaraha fiidiyowga. Iyadoo aan si cad loo qeexin waxa doorkiisa cusub uu la shaqeyn doono Apple, ma ahan wax adag in laga fekero inuu si buuxda u gelayo mashaariicda Apple Arcade, ARKit, iyo suurtagal, horumarinta muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah ku xanta in la sii daayo 2020.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay ka shaqeyn doona barnaamijyada kala duwan ee Apple, gaar ahaan Apple Arcade iyo adeegiisa cusub ee ciyaaraha ee iOS, iPadOS, macOS iyo tvOS. Wuxuu raaciyay: “Ciyaaraha AR / VR iyo barnaamijyada riixa waa kuwo aad u dhib badan. Meelaha loogu talagalay noocyada noocan ah waa in si aad u wanaagsan loo qaabeeyaa, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu xoog badan dhammaan noocyada barnaamijyada. Badanaa horumarinta nidaamyada loogu talagalay cayaaraha, waxay ka dhashaa fikradaha cusub ee UX, qalabka cusub ee loo yaqaan 'GPU chips', kuwaas oo aakhirka wada gebi ahaanba xalal cusub sida AI / ML ".
Xaqiiqdii waa soo dhawaynaysaa warka sheegaya in xirfadlayaal sida Brown ay ku biirayaan kooxda Apple. Miyaynu arki doonnaa Counter-Strike ee Apple TV? Waxay noqon lahayd qabow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Tim Cook Wuxuu Saxeexay Xbox Co-Founder ee Apple Arcade
Microsoft waxay na baraysaa Mac Book, oo ah nin dhiirrigeliya Laptop Laptop 2 ah
Mar dambe suurtagal maahan in hoos loo dhigo iOS 12.3